Android Photo Recovery - Ladnaansho Photos tirtiray ka Android
Casharrada Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ku Android
2 Ladnaansho tirtiray Files
2.1 Ladnaansho Photos
2.2 Ladnaansho Xiriir
2.3 Ladnaansho fariimaha qoraalka
2.4 Ladnaansho Videos
2.5 Ladnaansho Music
2.6 kabsado SD Card
Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Phones Android iyo murriyado
Waxaa jira sababo badan oo ah sababta inaad ka Dhuntaan sawiro ku saabsan qalab Android aad. Ayaa mid ka mid ah ugu badan waa tirtirka shil ah. Haddii aad u samayn naftaada ama ilmahaaga si lama filaan ah qasabadaha tirtirto qalabka Android aad, tani waa waddada ugu badan ay lumiyaan photos iyo sidoo kale macluumaad kale oo ku saabsan telefoonka. Si kale oo aad waayi kartaa sawirrada qalab aad waa haddii aad ku kaydsan aad MicroSD ka dibna aad lumiso qalab kaydinta. Tani waxay dhacdaa oo intaa ka badan in aad u malaynayso oo waa mid ka mid ah siyaabaha ugu laguna in ay lumiyaan macluumaadka sababtoo ah waa ku dhawaad ​​unsalvageable.
Laakiin laga yaabaa in sida ugu wax caadi ah, laakiin aad u halis ah in ay lumiyaan sawiro iyo xog kale oo ku saabsan telefoonka waa marka macluumaadka ku saabsan telefoonka aad Android waxaa si lama filaan ah overwritten. Ma uusan inta badan dhacaan, laakiin markii ay qabato, waxay u badan tahay in aadan heli doonaa xogta dib.
Sababaha kor ku xusan yihiin si hufan sababta ay tahay in aad leedahay raad raac ah oo dhammaan macluumaadka ku saabsan telefoonka. Habkan, haddii aad lumiso, waxaad si fudud u heli karaan dib. Laakiin haddii ay dhacdo in aad lumiso photos iyo aadan haysan gurmad ah, weli waxaa jira siyaabo aad dib ka heli kartaa sawiro aad.
Waxa cad in aad dib u baahan tahay kaalmo yar oo ah in aad sawiro si qalad ah la tirtiro, sax? Waa hagaag, sida ku saabsan kaalmo ka Caalamka 1aad software kabashada xogta helo. Wondershare Dr. Fone u Android kaa caawin doona inaad nooc kasta oo xog ka tirtiray telefoonka aad ka mid yihiin fariimaha, waraaqaha, files audio, videos iyo kuwa kale oo ka heli. Waxa kale oo aadan waqti ku lumiso barashada sida loo isticmaalo leeyihiin; waxa aad si fudud u shaqaysaa, kabsaday xogta oo dhan mid ka mid click.
Software Tani waxay taageertaa 2000+ qalabka android si aadan in aad walwasho ku saabsan telefoonka isagoo socon.
Tutorial: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Android Phones & Alwaaxdii
Tallaabada ugu horreysa waa in ay soo baxdo iyo rakibi Wondershare Dr. Fone. Marka lagu rakibay, waa in aad si aad u computer xirmaan telefoonka aad Android isticmaalaya fiilooyinka USB. Waxaa muhiim ah in aad loo hubiyo heerka batari aad telefoonka ee waa ugu yaraan 20% si aad u waxan yeeli karo si fudud. Marka aad telefoonka ku xiran, waa in aad suuqa kala this.
Waxa soo socda waa in la Debug qalab android aad. Raac tallaabooyinkan inay sidaa sameeyaan, taasi ku xirnaan doontaa version ee Android ee aad ka qabto qalab aad.
• Wixii Android 2.3 ama ka hor, waa in aad guji Settings ka dibna Codsiyada. Markaas guji Horumarinta iyo calaamadee sanduuqa calaamadeeyay debugging USB.
• Haddii aad socda Android 3.0 in 4.1, Riix Settings, markaas fursadaha horumarinta iyo ka dibna fiiri sanduuq calaamadeeyay USB debugging
• Wixii versions cusub ka badan 4.2, Riix Settings, markaas About Phone. Tubada on "Dhis Number" dhowr jeer ilaa aad ka hesho qoraal ah oo wuxuu ku yidhi, aad ka yar tahay hab sameeysa. Markaas dib ugu Settings ka dibna riix fursadaha Developer iyo calaamadee sanduuqa debugging USB ah.
The software Wondershare Dr. Fone ogaan doonaan qalab android iyo waxa ay u falanqeeyaan. Riix Start in ay oggolaadaan in software ah si ay u falanqeeyaan qalab aad. Falanqaynta qaadan doona oo kaliya dhowr daqiiqo.
Codsi arbushin doonaa saabsan telefoonka ama qalab. Riix ogolow si ay u sii wado. Tani waxay u ogolaaneysaa software-ka si ay u dhamaystiraan baaritaan qoto dheer oo qalab aad.
Marka Falanqaynta qoto dheer dhameystirneen, button bilowga muuqan doonaa mar kale sida aad ka arki karto sawirka kor ku xusan. Guji ku yaal iyo barnaamijka mar kale samayn doonaa baaritaan qoto dheer oo ah kaarka SD aad iyo xusuusta gudaha. Dhammaan xogta ah in la soo celin karin doonaan in si degdeg ah dib loo soo celiyo.
Kaliya dooro sawirada aad rabto in aad soo kabsadaan oo iyaga u heli doonto dib si dhakhso ah.
Sidee photos yihiin kuwa badbaadayaa ku Phones Android iyo murriyado
Sida caadiga ah Waxa jira laba siyaabood in inta badan dadka ka badbaadin doonaa sawiro ku shubtaan taleefanadooda iyagoo. Waxay sidoo kale u isticmaali doonaa kaadhka xusuusta dibadda ama gudaha xasuusta.
Dadka intooda badan door bidayaan in foomkan ee lagu kaydiyo, sababtoo ah waxay badanaa u maleeyaan in photos yihiin salvageable oo la raadsan karaa telefoonka ama qalab waqti kasta. Iyada oo ay tani waa mid aad run, sidoo kale waa run in kaarka MicroSD aad fujiyo waa ka telefoonka wakhti kasta, waxaad fursad u waayaan qalabka lagu kaydiyo yar. Luminta card SD aad ka dhigan tahay inaad lumiso oo dhan sawirro aad sidoo kale.
2. Gudaha Memory
Inta badan dadka ma doortaan in ay isticmaalaan xasuusta gudaha ku shubtaan taleefanadooda iyagoo; inta badan waa default doorasho. Inkasta oo waxaa laga yaabaa in ay fududahay in la kaliya ogolaan kaydinta aad telefoonka ee uu kaydiyo oo dhan sawiradaada, waa koox halis dheeraad ah. Sidaas waxyaalo badan oo dhici karto in ay keento khasaare ku sawiradaada. Waxaad si qalad ah iyaga tirtiri karo ama overwrite ah waxay keeni kartaa in khasaaraha ka mid ah oo dhan sawiradaada.
Sidee si looga fogaado in laga badiyay photos on Android
Waxaa jira siyaabo dhowr ah si looga fogaado in laga badiyay sawiradaada. Ugu sahlan tahay in la abuuro gurmad ah u sawiradaada. Iyadoo adeegyada daruur maanta, waxaad u samayn karaa si fudud oo si deg deg ah. Qalabka Android leeyihiin gurmad ah iyo soo celinta goobaha isticmaala xisaabtaada Google. Tani waa sababta lagu weydiin doonaa inaad u ID Google iyo password marka aad dejinayso qalab Android aad. Sidaa darteed waxaad isticmaali kartaa Google Back ilaa gurmad sawiro aad si fudud. Halkan sida. Ka hor inta aan geedi socodka la qeexo, waxaa muhiim ah in la ogaado in aad Google kaabta si toos ah updated doonaa mar kasta oo aad sawiro qaado.
Si aad qotomisay syncing ah, guji Photos iyo goobaha ka dibna dooro.
Markaas dooran auto gurmad oo shid, haddii aanay hore.
In uu furmo suuqa soo socda, dooran le'eg. Waxaad dooran kartaa Standard ama size Full. Doorashada heerka kuu ogolaanaya in aad si aad u hesho kaydinta aan xad lahayn oo lacag la'aan ah.
Sida in aad qotomisay Google syncing iyo mar kasta oo aad sawirro loo qaado waxaad u baahan doontaa si toos ah dib.
6 Features ugu farxada badan u Android 5.0 hurdiga ah
5 Talaabada inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ka Nexus 6
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiraa Android Phones